Uyenza njani uyilo lweWebhusayithi efikelelekayo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Uyenza njani uyilo olufikelelekayo kwiphepha lewebhu
USusana Do Carmo | | Uyilo lwewebhu
Iivenkile ezikwi-Intanethi, izicelo zebhanki, ukubhukisha ihotele okanye imisebenzi yokuzimela, ngakumbi nangakumbi imisebenzi eqhutywa nge-intanethi kwaye zithathe indawo, kwezinye iimeko, iindaba eziqhelekileyo.
Este ukukhula ngokukhawuleza kwemisebenzi yedijithali kuye kwenza kwalula kuthi kwiinkalo ezininzi ubomi. Isigcinela ixesha kuba ukuthengiselana kukhawuleza kwaye akukho sidingo sokuhamba siye nakuphi na ukusekwa komzimba, kwaye Imithombo yeendaba emitsha yenziwe engekabikho ngaphambili kwaye ngoku uninzi lwabantu lusebenzisa, ezinje ngothungelwano lwentlalo, ukusasaza iimovie kunye nothotho kumaqonga anjengeNetflix, okanye iinkqubo zokuhlawula kwi-Intanethi ezinjengePaypal.
Ngolu nyuko lwehlabathi ledijithali kubalulekile tyala imali kuphuhliso lonxibelelwano olufikelelekayo noluyilwe kakuhle Yabasebenzisi. Nangona kunjalo, asinakulibala oko kukho abasebenzisi abaphethwe ziziphene ngokwasemzimbeni nangokwasengqondweni okunciphisa kakhulu amava abo kunye nokukwazi kwabo ukusebenzisa iikhompyuter kunye nokuhamba.
Nangona kukho ukukhubazeka, njengabantu abasebenzisa izitulo ezinamavili, ezingaphazamisiyo ukusebenzisa i-Intanethi, ezinye, ezinje ngokubona okanye ukungaboni, iingxaki zokulungelelaniswa kweemoto, isithulu okanye i-autism zinokuthintela ukubanakho kwakho ukuhamba kwiwebhu. Kule meko, ezinye sele zenziwe zixhobo njengabafundi bescreen, abancedisa nabaxhasa abasebenzisi kwiindawo apho bakhubazeke khona.
Kodwa le yinxalenye yokuqala yokusombulula ingxaki. Ukucinga ngaba basebenzisi, kufuneka uyilo lwekhasi lewebhu eququzelela amava akho kwaye zilungele iimfuno zakho. Kukho imigaqo ethile xa uyila esinokuthi siyisebenzise.
1 Umxholo kunye nemithombo yolwazi
2 Isicatshulwa esingenye
4 Ukuhambelana kuyilo
5 Ukuhamba kwekhibhodi
Umxholo kunye nemithombo yolwazi
Ukuqala ngezona zisisiseko, kuya kufuneka setha izinto eziphambili ngokubaluleka kuyilo lomxholo. Intloko kunye nemenyu yebar kufuneka zibonakale ngokulula kwaye kufuneka ibe yinto yokuqala ayibonayo umsebenzisi. Izinto ezikwiphepha lasekhaya, imifanekiso kunye nolwazi olufanelekileyo iya kuba yeyesibini ukuyifumana.
Iintengiso okanye izibhengezo zentengiso zivela kumaphepha amaninzi. Ukuba kukodwa kuyacaphukisa bonke abasebenzisi, kwabo baneziphene ezibonakalayo kuba oko kubangela ukudideka okuninzi, kwaye kuphazamise ukufundwa komzobo wewebhu. Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuba wenze ifayile ye- Uyilo ngokubanzi lomhleli wephepha elingu zilungelelaniswe ngokufanelekileyo kwaye iyaqondakala, kwaye izinto zilinganiswe ngokufanelekileyo ngokufanelekileyo, ukuze nokuba kukho ezinye iziphazamiso, abasebenzisi banako ukugxila kumxholo obalulekileyo.
Iifonti ozisebenzisayo ngokukhethekileyo kufuneka babe inkulu kwaye ifundeka lula. Uhlobo Sans serif kwaye ukhaliphe Benza ukufunda kube lula kakhulu kubantu abanokuba nesifo sedyslexia. Ezinye iifonti ezicetyiswayo zezi: Arial, Times New Roman, Helvetica, Tahoma, Calibri, kunye neVerdana.
Ewe kunjalo, kuya kufuneka ukhathalele ukuba kukho umahluko ocacileyo phakathi isicatshulwa kunye nemvelaphi. Sukusebenzisa imibala efanayo, khetha imibala eyahlukileyo.
Sebenzisa iifonti zeSans Serif Bold kuvumela ukubonwa okungcono kwesicatshulwa.
El Enye into ebhaliweyo okanye i-Alt Tag, ziinkcazo ezibekwe kwimifanekiso kumaphepha ewebhu. Nangona oku okubhaliweyo kungafumaneki ukuba kufundwe ngabasebenzisi, a Inkcazo ebhalwe kakuhle sisixhobo esisinceda ukuba sifezekise indawo ebekiweyo ye-SEO.
Kodwa ukusebenziseka kweAlt Tag akuhli kuphela kuloo nto. Okwezo abasebenzisi abasebenzisa abafundi bescreen ukungaboni kakuhle, iinkcazo zemifanekiso zezi ireferensi ekuphela kwayo ekufuneka bazi ukuba yintoni imbonakalo yento evezwe kwiphepha. Ke ukuba siza kubeka, umzekelo, ifoto yezinye izinto ezintle, Esinye isicatshulwa esilungileyo siya kuba: Izityalo ezintathu ezinencindi kwiimbiza ezipinki. Isicatshulwa esifutshane kakhulu: Izityalo kwiimbiza, Ayisiyo inkcazo enika iinkcukacha ezifanelekileyo kwaye ke ayisebenzi.
Izityalo ezintathu ezinencindi kwiimbiza ezipinki. Umzekelo wesinye isicatshulwa.
Xa kuyilwa kufuneka sikuthathele ingqalelo konke umboniso apho ujongano lwethu luya kuboniswaNokuba ungaphakathi iwebhu okanye uguqulelo lweselfowuni. Amava aya kuhlala ahlukile ngokuxhomekeke kwindlela esiyijonga ngayo.
Xa sisebenzisa iselfowuni, sinokuvezwa kwiindawo ezahlukeneyo ezenza kube nzima ukufunda Umxholo kwesikrini. Ukuba singaphandle umzekelo, ukukhanya kwelanga kuya kwenza ukuba ikhusi libonakale limnyama kakhulu, kwaye ingxolo ayisivumeli ukuba sive isandi kakuhle. Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuba ucinge malunga nezi nkcukacha kakuhle, ukuze inguqulelo yeselfowni ibe noonobumba abakhulu kunye nemibala emnyama, kwaye iividiyo kufuneka zibe nemibhalo engezantsi kwimeko apho kunzima ukukuva.
Yenza i-interface yoyilo ukuze ifundeke kuzo zombini iifowuni eziphathwayo kunye neekhompyuter.
Uyilo lomhleli esikwenzayo ngewebhusayithi yethu kufuneka ifane ngaphandle kwecandelo Uphi. Iimpawu ze-bar zemenyu ezifanayo kufuneka zivele kwiCandelo laseKhaya njengakwicandelo labafowunelwa. Akufuneki sitshintshe isitayile okanye indawo yamaqhosha aphambili kwiwebhu.
Kananjalo akululanga kuthi ukuba sibeke iividiyo ezidlala ngokuzenzekelayo xa uvula iphepha. Kubasebenzisi abasebenzisa isikrini, kunzima ukwazi ukuba ungabanqumamisa njani.
Ibha yemenyu kwiphepha le-Starbucks iyafana kuwo onke amacandelo.
Okokugqibela, abanye abasebenzisi abaneengxaki zokulungelelanisa iimoto banobunzima bokubamba imouse yeekhompyuter okanye ukusebenzisa iphedi yelaptop, kwaye baxhomekeke kuphela kwikhibhodi. Qiniseka ukuba ukuba iwebhusayithi yakho yenzelwe ngendlela inokuba ngokugqibeleleyo isebenza kuphela ngamaqhosha ebhodi yezitshixo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Uyilo lwewebhu » Uyenza njani uyilo olufikelelekayo kwiphepha lewebhu
Ukuphucula uyilo lwezithuba zakho kunye nokufika komhlaba kwiWordPress ngeeShorcode zokugqibela
I-Adobe ibonisa iqhinga elitsha lokucofa umbala omnye kwi-Illustrator